Qalalaasaha Itoobiya \_"Waxaan ahaa caqli xumo in aan rumeysnaa in Itoobiyaanku aysan la dagaallami doonin gudaha - Amjambo Africa
Waaxa Qoray Jean Damascene Hakuzimana • Photos | Joseph Shaw
5-tii Maarso, Jaaliyada Tigray ee Maine waxay ku qabteen banaanbax ka dhacay hoolka hore ee Portland City Hall si ay dareenka ugu soo jeediyaan dhibaatada afar bilood jirsatay ee dadkooda ku haysata dalkooda hooyo ee gobolka Tigray ee Ethiopia, halkaas oo ku dhowaad saddex milyan oo qof lagu soo waramayo inay ku sugan yihiin oo u baahan gargaar bani’aadamnimo. Sida ay sheegayaan warbixino badan, dadka Tigreegu way gaajaysan yihiin – qaar badan oo gaajaysan – qaxootiguna waxay u qaxeen Suudaan.
Qiyaastii 80 qof ayaa ka soo qayb galay mudaharaadka, qaarna waxay ka yimaadeen meel fog ilaa Boston. Daniel Gebremariam, oo ah Mainer ka soo jeeda gobolka Tigray, ayaa sheegay inuu dareemayo waajibaad ah in la maqlo codka Tigray. Wuxuu muujiyay walaac ah in dagaalada udhaxeeya kooxaha itoobiya uu abuuri karo khilaaf udhaxeeya bulshada itoobiyaanka ah ee dibada jooga. \_”Waxaan rabaa inaan dareemo sida Itoobiyaan oo kale, oo aan u fiirsado walaalahayga reer Itoobiya sidii walaalo inkasta oo aan kala jinsiyadeena nahay,\_” ayuu yiri Gebremariam. Wuxuu sheegay inuu dareemayo nacasnimo aan rumaysanaynin in walaalaha Itobiya ay isku weerari karaan dagaal dhiig badan kudaato, sida mida hada kadhacda dawlada dhexe iyo kooxda xoreynta shacabka Tigray (TPLF).
“Federal Dowlada federaalka Itoobiya iyo kooxda TPLF ayaa dagaalamaya tan iyo bishii Nofeembar ee sanadka 2020. Amnesty International waxay diiwaan galisay xasuuq ka dhacay gobolka Tigray waxayna ku baaqday in baaritaan dhab ah lagu sameeyo, iyadoo ku sababaynaysa dambiyada dagaal iyo kuwa ka dhanka ah aadanaha. Sarah Jackson, Kuxigeenka Agaasime Goboleedka Bariga Afrika, Geeska, iyo Harooyinka Waaweyn ee Amnesty International, ayaa tiri, “Hadalka Wakiilka Sare ee Qaramada Midoobay wuxuu hoosta ka xariiqayaa culeyska dambiyada la sheegayo ee ay geysanayaan dhamaan dhinacyada isku haya Tigreega, iyo sida deg deg ah ee UN-ka oo hada shaqeynaya. Waa inay dirtaa baaritaan caalami ah, oo aan eex lahayn si loola socdo loogana warbixiyo xaalada loona soo uruuriyo loona ilaaliyo cadeymaha dambiyada ay galeen dhamaan dhinacyada. Ma jiro waqti la lumiyo – ka shaqee.
Xoghayaha Arimaha Dibada ee Mareykanka Anthony Blinken ayaa ku tilmaamay xaalada mid isir sifeyn ah intii lagu guda jiray dhageysiga gudiga Arimaha Dibadda ee Golaha, Wasiirka Arimaha Dibada ee Itoobiyana wuxuu kujawaabay dhanka Twitter, isagoo ugu yeeray eedeymaha Blinken \_”kuwo aan sal iyo raad toona kuheyn dowlada Itoobiya.\_” Si kastaba ha noqotee, eedeymaha loo soo jeediyo Ciidamada Difaaca Qaranka Itoobiya, Jabhadda Xoreynta Dadka Tigray, ciidamada qalabka sida ee Ereteriya, iyo Xoogagga Gobolka Amxaarada iyo maleeshiyo gacansaar la leh ayaa dhammaantood si weyn loogu eedeeyay dil. Kumaan kun.
Walaashey 15-sano jir ah ayaa kaligeed ah waxaana lagu hareeraysan yahay Tigray, aniga iyo Hooyona waxaan ka walwalsanahay xaaladdeeda, ”ayuu yiri Gebremariam, oo sharraxay in internet-ka uu hawada ka maqan yahay, adeegga taleefanka ayaa la heli karaa oo keliya mararka qaar.
Wuxuu sheegay in markii ay ku guuleysteen inay la soo gaaraan walaashiis, waxay ku tilmaamtay xaaladda dhulka inay tahay mid fowdo ah oo aan la rumeysan karin, iyadoo dhammaan dadka deegaanka la faray inay albaabada guryahooda u furnaadaan habeen iyo maalin, si xoogagga hubeysan – oo ay ku jiraan Eriteriyaan – u soo galaan. si loo hubiyo gudaha at.
Qof kastaa ma aamino in dhibaatada ka jirta Tigray ay tahay mid culus. Chemere Zewdie, oo gaadhay Addis Abbaba ayaa yidhi, “Hagaag, xaalada hada kajirta gobolka Tigreegu maaha sida looga maqlayo banaanka halkaas. Xitaa shalay markii aan taleefanka kula hadlay saaxiibkay oo jooga Mekelle, waxaan xaqiiqsaday in waxa lagu faafinayo meel ka baxsan Tigray ay gabi ahaanba ka duwan yihiin waxa dhulka yaal. ” Wuxuu aaminsan yahay inay jiraan olole ballaaran oo dacaayad ah oo dareensiinaya xiisaddan.
Waxaa si aad ah loo soo sheegay in ciidamo ka socda ciidanka Eriteriya ay ka gudbeen xadka si ay uga caawiyaan ciidamada difaaca ee itoobiya burburka Tigray. Gebremariam wuxuu sheegay in Ereteriya ay sugeysay waqti dheer si ay uga aarsato Tigray kadib tobanaan sano oo cadaawad iyo colaad dhuleed u dhaxeysay Eritrea iyo wixii horey u ahaan jiray Itoobiya ee Tigrey xukumi jirtay. Tigreega iyo Ereteriya waxay mar wada ahaayeen xulafo u halgamay sidii meesha looga saari lahaa xukunkii keli taliska ahaa ee Mingistu Xayle Mariam. Markii ay ku guuleysteen, 1991-kii, Ereteriya si deg deg ah ayey ugu dhaqaaqday gooni isu taag iyo sameystaan dalkooda, halka Tigreega iyo qowmiyadaha kale ay sameysteen Dowlad Federaal ah oo Itoobiyaan ah.
Ka hor khilaafka hadda jira, iyo xiisadaha ka dhashay, Gebremariam wuxuu sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay in Ra’iisul Wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed uu ku socdo dhabbihiisii hagaajinta xiriirka Eritrea. Waxay ahayd dadaal weyn in la furo xuduudaha u dhexeeya waddamada si ganacsigu dib ugu bilowdo dadka walaalaha ah. ” Si kastaba ha noqotee, markii walaashiis ay sheegtay in ciidamada Eritrea ay ku sugan yihiin Tigray dil, dhac, iyo kufsi, qiimayntiisii ayaa isbadashay.
Dawlad federaal ah oo uu hogaamiyo Tigray-ga Itoobiya ayaa xukumaysay wadanka muddo tobanaan sano ah, ilaa uu madaxweyne Meres Zenawi oo ka soo jeeda Tigray uu dhintey sanadkii 2012 – waana tan inkasta oo ay Tigray tahay qowmiyad tiro yar oo ka kooban kaliya 6% dadka wadanka. Geeridii Meres Zenawi kadib, qoomiyadihii Tigreega waxay bilaabeen inay lumiyaan awoodoodii, laakiin waxay sii hayeen xilalkii muhiimka ahaa ee ciidanka iyo dawladda. Mudaharaadyada looga soo horjeedo xadgudubyada xuquuqda aadanaha, dilkii mudaharaadayaasha ciidamada dawladu, dhamaantood waxay wadada u xaareen Raysal wasaare Abiy Ahmed oo ka soo jeeda Oromo inuu xukunka ku sii fuulo 2018. Maalmo ka dib, Abiy Ahmed wuxuu bilaabay inuu khilaaf kala dhexeeyo madaxdii Tigreega, kuwaa oo iska diiday, una diiday ka mid noqo isbahaysiga cusub ee Abiy sameysanayay.
Gebremariam wuxuu ugu yeeray ra’iisul wasaare Abiy inuu dhagaysto dhammaan dadka reer Itoobiya, lana joojiyo khilaafka. Wuxuu eedeyn dusha uga tuuray Dowlada Federaalka, oo uu sheegay inay ku jileyso doorka aabe ee dalka, laakiin ay naxariis daro kula dhaqmeyso qaar ka mid ah caruurtiisa, halkii ay ka keeni lahaayeen miis isku mid ah, oo ay dhageysan lahaayeen si ay u farsameeyaan xal xalaal ah. si loo dhameeyo khilaafka. Xalku waa in uusan noqon mid salka ku socda, oo uusan noqon dhinaca kale, ”ayuu hadalkiisa kusoo gabagabeeyay.
PreviousCusbooneysiinta ka timid ILAP
NextMiyaad ka fikireysaa inaad u wado Uber ama Lyft? Hubso inaad ka fekereyso caymiska!